Xanuunka qofku uu shakhsiyad ahaan qalbi jilicsan yahay, EIPS – Mind Forum
Hem>Lär dig mer>Fakta>Xanuunka qofku uu shakhsiyad ahaan qalbi jilicsan yahay, EIPS
Xanuunka qofku uu shakhsiyad ahaan qalbi jilicsan yahay, EIPS, ama sida loo yaqaano Khadka xadka, waxa uu qeexaa dhibaatooyinka aad leedahay haddii aad niyad ahaan aad u qalbi jilicsan tahay, walwal badan tahay oo aad leedahay qaab dhaqan waxdumis ah. Haddii aad leedahay EIPS waxaad ku dhici kartaa xaalad waali ah halkaas oo aad waxkasta shaki ka qaado, adiga naftaada iyo dadka kaleba. Waxaad si dhaqso ah iskugu bed bedeshaa noocyada dareenada kala duwan, iyadoo aad ka soo bixi karto shaki oo aad farxad gasho muddo waqti gaaban ah.
Waxa caadi ah in aad dareento inaad wax xun dareemeyso oo aad dareento ceeb badan haddii aad qabto dhibaatooyinkan. Laakiin kaligaa ma tihid, waxaana jira daaweyn u gaar ah EIPS. Waxa xataa jira waxyaalo badan oo aad sameyn karto si aad uga roonaato.